जोखिम रक्षावरण योजना(एच्छिक सुविधा) – Prabhu Life Insurance
जोखिम रक्षावरण योजना(एच्छिक सुविधा)
अस्वस्थ्य जीवन शैली तथा आधुनिकिकरणले हाम्रो स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दैछ । विभिन्न प्रकारका प्राण घातक रोगहरुको लागि तपाई हामीले हाम्रो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नु परेको छ । तसर्थ स्वस्थ्य जिवन शैली बाँचाैं प्राणघातक रोगहरुबाट बचौँ र रोगको उपचारको निमित्त पहिले नै सजक बनौँ ।
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले “प्राणघातक रोगहरु” को उपचारमा आर्थिक रुपमा सहयोग पुर्याउन र उपचारमा हुने खर्चहरुबाट सुरक्षित रहन निम्न प्राणघातक रोगहरुको उपचारमा रु. १०,००,०००/-(दस लाख रुपैंया) सम्मको बीमा योजना ल्याएको छ ।
उपरोक्त रोगहरुको निदान गर्न वा सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सकबाट रोग लागेको प्रमाणित भएमा यो सुविधाहरु प्रदान गरिनेछ :
S. No. रक्षावरण प्रदान गर्ने ११ वटारोगहरु:
2 Kidney Failure (End Stage renal Failure)
3 Primary Pulmonary Arterial Hypertension
4 Multiple Organ Transplant
5 Major Organ Transplant
6 Coronary Artery Bypass Graft (with surgery to divide the breastbone)
7 Surgery of Aorta
8 Heart Valve Surgery
10 Myocardial Infraction (First Heart Attack)